Ezemidlalo Young MMA. Kuyini Mixed Martial Arts?
Mixed Martial Arts, noma MMA - umdlalo kwetfulwe abasha, kuyanda kakhulu unyaka ngamunye. Uma eminyakeni embalwa edlule kwakunzima ukuthola umuntu, ngisho nangezinga elincane, kubonakala sengathi i-karate okuxubile, kodwa namuhla iningi bezemidlalo futhi wonke liyajabulisa karate ubazi ukuthi. MMA imele Mixed Martial Arts, okuyinto uchaza kahle kulo mdlalo, ngoba kungabandakanya abameleli zonke izikole nezitayela karate.
Kuze kube manje, izigidi emhlabeni MMA abalandeli. Yiziphi abakuthola kulo mdlalo? Kuyini edonsela mass omkhulu zabantu? Impendulo itholakala arsenal ezibanzi yezenzo lobuchwepheshe kuvumelekile okuxubile karate. Wena ubulokhu ufuna ukuthola ukuthi ubani onamandla - a wrestling noma boxer? MMA yokuhlala cishe wonke amasu arsenal ukushaqeka wrestling. Ekuqaleni, ningatholakala eziningi ezikhethekile ukushaqeka reception noma i-wrestling, kodwa isikhathi abadlali professional kahle izinto ephumelela kunazo kusuka ezihlukahlukene karate.
Omunye ethandwa kakhulu karate e MMA kuyinto Brazilian Jiu-Jitsu. Lolu hlobo lokulwa is zihlose kakhulu isenzo emhlabathini, futhi eqinisweni izimpi eziningi ngokushesha noma kamuva ukuya esitezi. Futhi kukhona BJJ fighter kalula ukuthi ubani boss.
Umqondo ngokudala imicimbi efana alulusha. Okuningi ezikhathini zasendulo kwakuqondwe evuthiwe karate. Tournament ku karate wawuyingxenye iMidlalo Yama-Olympic futhi ngokuthi Awe-Pankration. Ngokusobala, lezi zenzakalo ezivele zenzeke zazifana MMA yesimanje. Kuyini Awe-Pankration akwaziwa, kodwa le midlalo kuleli mqhudelwano ngo zabo ezinonya kakhulu futhi ngokuvamile yaphela kufa omunye wabangane fighters.
Umlando alandelayo okuxubile karate liqala ngala Gracie umndeni edume. Martial kulomndeni engavamile babé ngokusobala umsebenzi oyinhloko. Ekuqaleni le XX leminyaka in Brazil wafika Mitsuo Maeda - judo master ovela eJapane, idume ikhono lakhe ukulwa phansi. Nguye wafundisa izingane komngane wakhe Gastana Greysi, afikelwe Brazilian Jiu-Jitsu. Ekuqaleni akekho bakholwa kusebenta lokhu ubuciko amasosha, ngakho amakhosi umndeni Gracie kwakumelwe azibonakalise kwamandla abo umkhuba. Bona wabiza abameleli iyiphi karate lwempi, kepha efaniswe MMA yesimanje. Mhlawumbe elwisana phakathi fighters kusuka imbulunga ne amakhosi Brazilian Jiu-Jitsu faka abantu ukudala umdlalo enjalo umbukwane like okuxubile karate.
Lesi Sikhungo esivame ukubizwa okuxubile karate izimpi ngaphandle imithetho, kodwa nje owandile onganembile. Naphezu ukufana kwangaphandle lokulwa komhlaba ngaphandle imithetho - lokhu akulona MMA. Yini elwa yezinyoni, uma kungekhona nabangenasihawu chopper kunezinxushunxushu? Umncintiswano okuxubile karate isethi ecacile imithetho, ukuhlukumeza zazo kuholela ukuhoxiswa kwabantu othanda ukulwa. Imithetho aklanyelwe ukuvikela abasubathi kusuka ezindleleni eziyingozi kakhulu ukuba bavikele impilo yabo. Lapho sizakwenza fighters professional, uma emva izimpi ambalwa nokufa noma ukukhubazeka? MMA - umdlalo yesimanje, zama noma nini uma kungenzeka ukuvikela impilo kanye nabadlali bakhona.
Namuhla mncintiswano e-karate okuxubile labetibambile ezingeni eliphezulu kakhulu. Indlela umsindo inhlangano tournaments Ukusabalala imicimbi ebalulekile emhlabeni MMA akwenzele umsebenzi wakhe - abantu abaningi babe abalandeli lo mdlalo ezikhexisa umlomo. Yiqiniso, okuxubile karate elide ukuya phambi ukuqashelwa jikelele sondela them, kodwa manje singasho ngokuqinisekile ukuthi ukuthandwa izimpi e yezinyoni luyokhula kuphela.
A ezihlukahlukene amasu kanye ningatholakala uthembisa ibe yimpumelelo enkulu mdlalo we esizayo - MMA. Kuyini Mixed Martial Arts? Lokhu umoya oqabulayo for the ezemidlalo emhlabeni ossified karate!
Levan Tediashvili - Georgian fighter abadumile Soviet
Basil: isitoreji ebusika ngezindlela ezahlukene
Spain - umbuso phansi kwelanga eningizimu. Amaqiniso ethakazelisayo lizwe, izinto
Umuthi 'Orasept ": ukubuyekezwa odokotela, imfundo izingane
Fashion guys Bald: isitayela, amaqiniso athakazelisayo kanye nezici
Ithebula Stone noma dolmen - kuyini?